Iindaba -Ifoto yeqela yabanye abasebenzi
UMnu Wu: 008613216973888
Ukungenisa uMothuko weSithuthuthu
Ifoto yeqela yabanye abasebenzi
Umphathi Jikelele uWu Yunfu wenze intetho eyamkelekileyo kwinkomfa. Wamkele ngezandla ezishushu zonke iindwendwe kwaye wabulela ngenkxaso yabo yexesha elide kuphuhliso lweLujury, kwaye wazisa imeko yangoku yophuhliso kunye nocwangciso lweLujury ngendlela ebanzi necacileyo.
Umphathi Jikelele uWu Yunfu wenze intetho
U-Wu Yunfu uthe: Injongo yokubamba iqonga lesithathu lomgangatho wabathengisi kukuhambisa izimvo zethu, ukumamela iingcebiso zakho, ukuphumelela inkxaso yakho, ukubeka phambili iimfuno zethu, ukwenza nzulu iimvakalelo zawo omabini amacala ukufezekisa imeko yokuphumelela.
U-Wu Yunfu wakhankanya ukuba oko kwamiselwa, u-Lujury ebesoloko ekholelwa ukuba "umgangatho sisiseko seshishini" kangangeminyaka eli-18, kwaye wenze ubuhlobo obunzulu namaqabane akhe. Ngeenzame nenkxaso yababoneleli, iye yamkelwa Uninzi lweemoto zombane ezidumileyo, ezinje nge-AIMA, LIMA, LUYUAN kunye ne-SLANE. Okwangoku, uLujury ubeke phambili isiqubulo esithi "sidala ikamva ngentliziyo" .Sizimisele ukuqhubeka sisebenza kunye namaqabane ethu sikhangela ikamva. Ixesha elitsha kunye nohambo olutsha, siya kuhlala senza ubukhazikhazi obutsha.
Usekela mphathi jikelele uZhang Juqin uzimase le ntlanganiso
Ngokwendlela yokuqonda izibonelelo ezincedisayo kunye nentsebenziswano yokuphumelela, u-Wu Yunfu ucebise ukuba abathengisi kufuneka bakalwe ngokweendlela ezininzi.
Okokuqala, ixesha lokuhambisa: ukufika ngexesha kwezinto zezinto ezibonakalayo kukunyaniseka kweshishini. Isitshixo sentsebenziswano yokuphumelela kukuphumelela.
Okwesibini, umgangatho: Ukomeleza ulawulo lomgangatho wemveliso yeefektri zangaphambili kunye nokunciphisa ubungakanani bembuyekezo.
Okwesithathu, inkonzo: Ukuphucula umgangatho wenkonzo ngokusekwe kwiinyani.
Okwesine, uphuhliso lwemveliso entsha: Inzululwazi nethekhinoloji ezintsha zezona zinto ziqhuba kuphuhliso lweshishini, kwaye i-R & D ifuna ukusebenzisana, kunye nezinto ezintsha ziya kuvuselela inkangeleko yemeko yokuphumelela.
Umlawuli wezobuchwephesha uPeng Hao wenza intetho
UPeng Hao ucacisile kumgangatho wobuchwephesha kula manqaku mathathu alandelayo, eyile nkonzo, ubuchule kunye nomgangatho.
Okokuqala, inkonzo. Phantse yonke inkampani ebalaseleyo ibheka inkonzo "njengesixhobo" sokusinda kweshishini. Nayiphi na inkampani engayikhathaleli inkonzo kwaye isilele ukwanelisa iimfuno zabathengi iya kugwetywa
Okwesibini, ezintsha. Usuku olutsha lwenza usuku olutsha. Ukuqinisekisa ukukhula okuqhubekayo kunye nokusebenza, amashishini kufuneka ahlaziye rhoqo.
Okwesithathu, umgangatho. Kuphuhliso olulungileyo, amashishini kufuneka agxininise ukubaluleka komgangatho wemveliso, bubomi beenkampani. Ngaphandle kokuthenjwa kwabathengi kumgangatho wemveliso, ubomi beenkampani buya kufutshane.
UWu Yuqun, Umphathiswa Wezolawulo Lwezinto wenze ingxelo.
Le ntlanganiso imisele iqonga elilungileyo lonxibelelwano olunzulu phakathi kweLujury kunye nababoneleli, kwaye yafikelela kwinjongo elindelekileyo yokwakha isivumelwano kunye nokudityaniswa okunzulu. Emva kwentlanganiso, onke amacala athe azakuthatha eli thuba ukuqinisa ngakumbi unxibelelwano, ukuphucula umbono wentsebenziswano, kunye nokusebenza kunye ukufezekisa imeko yokuphumelela kwixa elizayo.
Ixesha lokuposa: Aug-26-2020
No.1 Building, Village Tantian, Hengjie Town, District Luqiao, Taizhou City, kwiPhondo Zhejiang